Ahoana no To mahafotsy ny nifinao | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Posts tagged "ny fomba mahafotsy ny nify"
Ahoana ny fampiasana an-trano mahafotsy nify Whitening fomba fiasa
Baking soda tsy ampy amin'ny an-dakozia ny saika ny trano rehetra ary manampy ny fomba mahafotsy ny nify. Olona mampiasa fanaova soda ho toy ny tastemaker. Baking soda koa ampiasaina ho fanadiovana tanjona. Tsy miasa amim-pahombiazana mba hanala Mahery be fofona avy amin'ny vata fampangatsiahana. Azonao atao ny mampiasa ny fanaova soda noho ny fanadiovana ny nify. Baking soda dia Marokoroko sy eo amin'ny natiora sy ny endri-javatra ity dia manampy anao manala tasy avy amin'ny ivelany indrindra mankany ambonin'ny ny nify. Ho solon'ny nify Whitening, maka lovia kely sirahazo, vitsivitsy indray mitete ny rano sy ny mando malemilemy-bristled borosy nify. Alao ny soda amin'ny rofia ary hametraka mampisavoana ny rano ho azy io mba hanao Mametaka izany. Ary hanoboka ny borosy nify ho any amin'ny feta sy miborosy nify. Afaka manaraka izany fomba araka izay indray mandeha isan-kerinandro.
Posted by mahafotsy Teeth Guide - Jona 4, 2016 amin'ny 10:24 AM
Sokajy: Mahafotsy Teeth Tips Tags: an-trano nify Whitening, ny fomba mahafotsy ny nify, mahafotsy ny nify